प्रारम्भिक आलु प्रजातिहरू
को infield कुनै पनि गर्मी निवासी वा मालिकको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण superrannie आलु प्रजातिहरू, सबै भन्दा फलदायी थाहा, पाठ्यक्रम, सारा जाडो झूठ सक्नुहुन्छ गर्नेहरूलाई छ, र। मिति, त्यहाँ बारेमा चार हजार जो केवल 290 रूसी संघ मा खाना प्रयोगको लागि स्वीकृत छन् आलु, को किसिमहरु को सबै प्रकार को हो।
आलु प्रजातिहरू मात्र रंग, स्वाद, tubers को आकार मा छैन फरक, तर पनि पक्कै शब्द बुढ्यौली मा। जब आलु रोपण अवस्था एक विशाल संख्या विचार गर्नुपर्छ:
पहिलो, तपाईंले खातामा तपाईं रोपेर जाँदैछन् जसमा क्षेत्र को peculiarities लिनु आवश्यक;
दोश्रो, परिपक्वता को अवधि (प्रारम्भिक आलु प्रजातिहरू - 90 दिन पछि - पूर्ण पकने 70-75 दिन, मध्य लागि पुग्न अधिक 120 दिन);
तेस्रो, यो खातामा (चिप्स मा प्रसंस्करण, बिक्री को लागि सुकेको आलु स्टार्च तयारी, आदि) जसको लागि आलु लगाए उद्देश्य लिन आवश्यक छ। Lorch, Berlichingen, हाइब्रिड-14 र अरूलाई: बिक्री को लागि जस्तै आलु विविधता सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट बाली हुनेछ।
दुर्भाग्यवश, रूसी स्टोर को समतल मा इजरायल, इजिप्ट, पोल्याण्ड, मोरक्को, साइप्रस बाट आयात झन् साधारण आलु छन्। यो मुख्यतया, तथ्य हाम्रो देश को सबै भन्दा धेरै लामो र चिसो जाडो महिनामा र धेरै छोटो न्यानो अवधि छ, कारण छ। मात्र तरिका वैज्ञानिकहरूले फेला कि, - आलु को प्रारम्भिक प्रजातिहरू रोपण गर्दा प्रयोग गर्नुहोस्।
तर प्रारम्भिक-maturing प्रजातिहरू मात्र गर्मी र शरद ऋतु अवधिमा खपत लागि उपयुक्त हो र भण्डारण गर्न आफूलाई उधारो थिएन। सुरुमा यो tubers बिरुवाहरु, लोचदार रसदार र छाडा, भण्डारण rots को सबै भन्दा पछि लामो र मानव आहार मा खपत लागि पूर्ण व्यर्थ हुन जान्छ।
Varms, Vyatka, बेलारुसियाली प्रारम्भिक, Priekule सुरुतिर स्पार्क, Domodedovo - रूसी नागरिक बीच लोकप्रिय छन् भनेर प्रारम्भिक आलु प्रजातिहरू।
Vjatka - उच्च पैदावार र रोगहरु राम्रो प्रतिरोध द्वारा विशेषता छ किसिम (phytophthora, भाइरल रोग, द्रोही एट अल।)। Tubers लोचदार धेरै ठूलो छ, गोलो आकारको। 3-4 महिनाको लागि सीधा भण्डारण गरिएका tubers अप digging पछि।
Varms - प्रारम्भिक आलु एक प्रकारको। Tubers oblong, सेतो रंग बन्द एक बोक्रा भएको। खाना पकाउने बेलामा अलग, गिर छैन सलाद लागि यति धेरै उपयुक्त।
Domodedovo - क्लास प्रारम्भिक-पकने प्रजातिहरू सम्बन्धी। उत्कृष्ट स्वाद, उच्च उपज - कि के आलु को लाभ हो। Tuber oblong, छैन धेरै ठूलो छ, लगभग अदृश्य आँखाले। आलु अपेक्षाकृत शायद भाइरल संक्रमण वा जीवाणु रोग को सिकार बन्छन्।
Priekule प्रारम्भिक - एक सभ्य उपज र haraktarizuetsya तीव्र परिपक्वता छ जो आलु एक प्रकारको। बुद्धिमान उपस्थिति, शरीर रंग सेतो, धेरै रसदार। जब निशान आलु कालो स्पट ढाकिएको छन्।
गर्न आलु को प्रारम्भिक प्रजातिहरू ठूलो बाली एक दिनुभयो, केही नियमहरू यसको खेती अवलोकन हुनुपर्छ।
पहिले, प्रारम्भिक आलु प्रति लगाए तीन झाडी 10 लिटर को दरमा पानी हाले गर्नुपर्छ। माटो आवश्यक छ आवश्यक रूपमा Moisten, तर प्रति हप्ता समय छैन कम 1 भन्दा।
दोश्रो, एक राम्रो आलु को बाली गीली प्रयोग गर्दा पैदावार। यो प्रक्रिया एक ग्रीनहाउस सिर्जना मिल्दोजुल्दो छ। जमीन मा आलु disembarking पछि, सम्पूर्ण क्षेत्र गीली सामाग्री ढाकिएको छ। जमीन देखि चिस्यान व्यावहारिक वाफ बन्नु छैन, सामा अङ्कुराउन छैन, र जमीन एक पाप्रो ढाकिएको छैन।
तेस्रो स्थानमा, आलु को प्रारम्भिक प्रजातिहरू यस परीक्षण को लागि त तयार, crumbly र छाडा पृथ्वीको धेरै रुचाउनु छन्।
Violets पात किन खडा र मोड?
टमाटर "बीफ हृदय": बढ्दै मा फोटो र सुझावहरू समीक्षा
हामी सुनगाभा Dendrobium nobile बढ्न
एथेन्स को Acropolis - विश्व संस्कृति को एक धन
कसरी विशेष खेल उपकरण संग फिर्ता स्विंग, र तिनीहरूलाई बिना गर्न?
बाख्रा र बाघ: एक सम्बन्धमा अनुकूलता
अनुकूलता मकर र कुंभ। जटिल सम्बन्ध
Chainsaw "मैत्री": इतिहास र वर्तमान
रोग "टाउको दुखाइ" हुँदैन - यो एक अलग रोग आशय छ
कसरी उपयोगी porridge
दिव्य गुफा, पर्म क्षेत्र: फोटो र समीक्षा